New games release iOS & Android, weekly – REDPlayer
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဂိမ်းတွေများပါတယ်။ အချိန်မရတာနဲ့ မဆော့ဖြစ်ကြတာနဲ့ဆိုတော့ ဆော့ဖြစ်သမျှတော့ ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
Mobile ကိုရောက်တာရက်ကြာနေပြီဆိုတော့ chicken dinner ကောင်းကောင်းဆွဲပြီးကြလောက်ရောပေါ့။ PlayerUnknown’s BattleGround ကတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်း mobile game ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်မပျက်ရပါဘူး။ PC နဲ့ Xbox မှာတောင်မပါတဲ့ feature တွေထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အချက်က တစ်ခါတစ်လေ အနှေးတတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ ဆော့လို့ အဆင်မပြေတာပါပဲ။ Tencent ကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒါတွေကိုပြင်ဆင်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ mobile ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့အတွက်တော့ tablet မှာပဲ အကောင်းဆုံးဆော့လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါကတော့ မဆော့ဖြစ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ 2011 လောက်တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ Shadowgun နဲ့ 2012 တုန်းက Shadowgun:Dead Zone တို့အပြီး ၆နှစ်လောက်ကြာမှာတော့ Shadowgun Legends ထွက်ရှိလာပါပြီ။ FPS RPG ထဲမှာအကောင်းဆုံး တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်။ စစချင်းမှာ Destiny နဲ့တူတယ်လို့ခဏလေးတော့ ထင်မိလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမဆိုင်မှန်းသိလာရပါလိမ့်မယ်။ FPS game တစ်ခုမှာ မျှော်လင့်သမျှကိစ္စ စုံစုံလင်လင်ထည့်ပေးထားတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ Multiplayer မှာလည်း ကောင်းကောင်း ဆော့လို့ရပါတယ်။ တကယ်က ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် co-op ပဲဖြစ်ဖြစ် ၂ ခုစလုံးမှာ တကယ်ကို smooth ဖြစ်ပါတယ်။ (connection လည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်။) လက်ရှိမှာ PUBG mobile နဲ့ Fortnite လည်းရှိနေတော့ ဒီဂိမ်းဘယ်အထိသွားမလဲကတော့ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့လေ။ တစ်ချို့ကတော့ repetative ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရမယ်ထင်တယ်။ ကြေးစားစစ်သားတွေကို ဆယ်လီ rocker ကြီးတွေလိုသဘောထားတဲ့နေရာကိုသွားချင်ရင်တော့ Shadowgun legends ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
“မျှော်လင့်ချက်တွေရဲ့ အတက်အကျတွေတိုင်းဟာ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဖုန်ဆိုးမြေတွေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်၊ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ခေတ်ကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက် အရာရာဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ အမှောင်ထုထဲမှာပဲ ပိတ်မိနေကြတုန်း….ဒါပေမယ့် ဒီဒေသ ဒီနယ်မြေကို အဆုံးအထိဖြတ်သန်းသွားမယ့် ဒါမှမဟုတ် အရိပ်ဆိုးတွေကို အဆုံးသတ်ပေးမယ့် သူတစ်ယောက်တော့ကျန်သေးတယ်…” ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီလိုလေးစထားပါတယ်။ Ire Blood Memory ကိုကောင်းကောင်းဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီတစ်ခါလည်း အကောင်းဆုံး combat ကိုတွေ့မြင်ကြရဦးမှာပါ။ အမြဲတမ်း combat system တွေမှာ နံပါတ်တွေနဲ့ရှု့ပ်နေတဲ့ screen ကိုမတွေ့ရပဲ တကယ့် တိုက်ခိုက်ရေးစစ်စစ် ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 2.1GB လောက်နဲ့ $8 တန်အပြင် in-game မှာလည်း gems တွေဝယ်ပြီး upgrade တွေလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
SRPG ဂိမ်းတစ်ခုပဲဆိုပါတော့။ game ကိုမြင်ရမှာတော့ pixel style ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘက်မှာ comic ကိုအခြေခံတဲ့ visual comic လိုဖြစ်ပြီး တစ်ဘက်မှာတော့ turn-based strategy ဖြစ်ပါတယ်။ gacha system မှာတော့ pilot တွေကသူတို့မောင်းတဲ့ mecha တွေကိုစုရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲ moe မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ မဆော့တာအကောင်းဆုံးပဲ။
Chicken dinner တွေရပါစေဗျာ….
ဒီတဈပတျမှာတော့ ကိုယျကွိုကျတဲ့ ဂိမျးတှမြေားပါတယျ။ အခြိနျမရတာနဲ့ မဆော့ဖွဈကွတာနဲ့ဆိုတော့ ဆော့ဖွဈသမြှတော့ ပွနျရှယျလိုကျပါတယျ။
Mobile ကိုရောကျတာရကျကွာနပွေီဆိုတော့ chicken dinner ကောငျးကောငျးဆှဲပွီးကွလောကျရောပေါ့။ PlayerUnknown’s BattleGround ကတော့ပွောထားတဲ့အတိုငျး mobile game ထှကျလာတဲ့အခါမှာလညျး စိတျမပကျြရပါဘူး။ PC နဲ့ Xbox မှာတောငျမပါတဲ့ feature တှထေညျ့ပေးထားတာတှရေ့ပါတယျ။ မကောငျးတဲ့ အခကျြက တဈခါတဈလေ အနှေးတတျတာဖွဈပွီးတော့ တဈခြို့ဖုနျးတှမှော ဆော့လို့ အဆငျမပွတောပါပဲ။ Tencent ကတော့ နောကျပိုငျးမှာ ဒါတှကေိုပွငျဆငျသှားမယျထငျပါတယျ။ mobile ဆိုပမေယျ့ ကြှနျတော့အတှကျတော့ tablet မှာပဲ အကောငျးဆုံးဆော့လို့ အဆငျပွပေါတယျ။ ဒါကတော့ မဆော့ဖွဈသေးတဲ့သူတှအေတှကျပါ။
လှနျခဲ့တဲ့ 2011 လောကျတုနျးက ထှကျခဲ့တဲ့ Shadowgun နဲ့ 2012 တုနျးက Shadowgun:Dead Zone တို့အပွီး ၆နှဈလောကျကွာမှာတော့ Shadowgun Legends ထှကျရှိလာပါပွီ။ FPS RPG ထဲမှာအကောငျးဆုံး တဈခုလို့ပွောလို့ရပါလိမျ့မယျ။ စစခငျြးမှာ Destiny နဲ့တူတယျလို့ခဏလေးတော့ ထငျမိလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမှမဆိုငျမှနျးသိလာရပါလိမျ့မယျ။ FPS game တဈခုမှာ မြှျောလငျ့သမြှကိစ်စ စုံစုံလငျလငျထညျ့ပေးထားတယျလို့မွငျပါတယျ။ Multiplayer မှာလညျး ကောငျးကောငျး ဆော့လို့ရပါတယျ။ တကယျက ပွိုငျဘကျတှနေဲ့ပဲဖွဈဖွဈ co-op ပဲဖွဈဖွဈ ၂ ခုစလုံးမှာ တကယျကို smooth ဖွဈပါတယျ။ (connection လညျးပါမယျထငျပါတယျ။) လကျရှိမှာ PUBG mobile နဲ့ Fortnite လညျးရှိနတေော့ ဒီဂိမျးဘယျအထိသှားမလဲကတော့ စောငျ့ကွညျ့ကွတာပေါ့လေ။ တဈခြို့ကတော့ repetative ဖွဈတယျလို့ခံစားရမယျထငျတယျ။ ကွေးစားစဈသားတှကေို ဆယျလီ rocker ကွီးတှလေိုသဘောထားတဲ့နရောကိုသှားခငျြရငျတော့ Shadowgun legends ပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။
“မြှျောလငျ့ခကျြတှရေဲ့ အတကျအကတြှတေိုငျးဟာ နောကျဆုံးတော့လညျး ဖုနျဆိုးမွတှေထေဲမှာပြောကျကှယျသှားကွတယျ၊ သူရဲကောငျးတှရေဲ့ ခတျေကုနျဆုံးပွီးတဲ့နောကျ အရာရာဟာ မကောငျးဆိုးဝါးတှရေဲ့ အမှောငျထုထဲမှာပဲ ပိတျမိနကွေတုနျး….ဒါပမေယျ့ ဒီဒသေ ဒီနယျမွကေို အဆုံးအထိဖွတျသနျးသှားမယျ့ ဒါမှမဟုတျ အရိပျဆိုးတှကေို အဆုံးသတျပေးမယျ့ သူတဈယောကျတော့ကနျြသေးတယျ…” ဇာတျလမျးကတော့ ဒီလိုလေးစထားပါတယျ။ Ire Blood Memory ကိုကောငျးကောငျးဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ ဒီတဈခါလညျး အကောငျးဆုံး combat ကိုတှမွေ့ငျကွရဦးမှာပါ။ အမွဲတမျး combat system တှမှော နံပါတျတှနေဲ့ရှု့ပျနတေဲ့ screen ကိုမတှရေ့ပဲ တကယျ့ တိုကျခိုကျရေးစဈစဈ ဂိမျးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ 2.1GB လောကျနဲ့ $8 တနျအပွငျ in-game မှာလညျး gems တှဝေယျပွီး upgrade တှလေုပျလို့ရပါသေးတယျ။
SRPG ဂိမျးတဈခုပဲဆိုပါတော့။ game ကိုမွငျရမှာတော့ pixel style ပဲဖွဈပါတယျ။ တဈဘကျမှာ comic ကိုအခွခေံတဲ့ visual comic လိုဖွဈပွီး တဈဘကျမှာတော့ turn-based strategy ဖွဈပါတယျ။ gacha system မှာတော့ pilot တှကေသူတို့မောငျးတဲ့ mecha တှကေိုစုရတဲ့ပုံစံဖွဈပါတယျ။ တဈခုပဲ moe မကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ မဆော့တာအကောငျးဆုံးပဲ။
Chicken dinner တှရေပါစဗြော….
Tags android FPS iOS mobile trailer weekly